Daandiiwwan Fayyaalessa Ta’anii Turan - Seattle Traffic
Daandiiwwan Fayyaalessa Ta’anii Turan
Isin hangamuu yeroo baay’ee gara Lixa Siyaatil deddeebitanis, imalawwan murtaa’an lafoo ni deemtu, stroller dhiibdu ykn wilcheeriin ni deemtu. Nuyis namoota lafoo deemanii fi haala nagaalessa ta’een sigigaatan ni deeggarra. Kunis bakkeewwan magariisaa qe’ichaa (daandiiwwan qe’ee jireenyaa cal’isoo) duruma jiran garii isaanii gara Daandii Fayyaalessatti jijjiiruun dha.
Daandiiwwan Fayyaalessummaan Turan – konkolaattotaaf cufaa ta’u – garuu, jiraattotaaf ykn dhiyeessiiwwaniif miti – guyyaatti sa’a 24’f, torbanitti guyyoota 7’f (kunis hamma beeksisni dabalataa kennamutti dha). Tiraafikiin konkolaataa hir’atee argame kunis daandiiwwan kunneen irra imaluuf akkasumas qe’ee sana keessa lafoo deemuuf, sigigaachuuf ykn ride gochuuf nagaalessa taasisu.
West Seattle-Qe’ee Duwamish Valley keessa bakka Daandiiwwan Nagalessa ta’anii turan itti argaman barbaadaa.
Daandii Nagaalessa Ta’ee Turu: Kaartaa High Point
Daandii Nagaalessa Ta’ee Turu: Delridge/Highland Park Map
Daandiiwwan Nagaalessa Ta’anii Turan Bilookii keessanirra jiranitti fayyadamuu ni barbaadduu?
Qajeelfamoota keenya dubbisaati, hayyama Bilookii Nagaalessa Ta’ee Turu gaafadhaa. Daandiiwwan qe’ee jireenyaa naannoo manneen barnootaa jiran, ijoollee gara mana barnootaa fi irraa imalaniif, iddoo dabalataa kennuuf jecha, gara Bilookii Nagaalessa Ta’anii Turanitti jijjiiramanii arguu dandeessu.